भेटियो १२ अर्ब
नयाँ वर्ष २०१० को पहिलो ठूलो खुसीको खबर ⁄ बजारमा नोट अभाव हुनुका रहस्य बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञहरूले पत्ता लगाइहाले । उनीहरूका अनुसार यतिखेर १२ अर्ब रुपैयाँ सिस्टमबाट गायब छ । यही नै बजारमा यस्तो उखरमाउलो अभाव हुनुको अत्तिम कारण भएको निष्कर्ष बैंकहरूका विज्ञ सीइओहरूले निकालेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले बजारमा १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँका नोटहरू सर्कुलेट गरेको बताएको छ । तर सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग भएका सुको पैसासमेत जोड्दा पनि १ खर्ब भन्दा बढी हुँदैन । आफ्ना टेबुलमा अनिवार्य राखिएका ल्यापटप साइजका क्यालकुलेटर थिचेर बैंकको सीइओहरूले हिसाब निकालेका छन् – त्यो फरक रकम १२ अर्ब बजारमा हराएको रहेछ ।
हैन यो १२ अर्ब कुन दुलोभित्र पस्यो होला त ? हाम्रा ठूलाठूला बैंकका ठूलाठूला डिग्री गरेका र ठूलो तलब खाने सीईओहरूले पनि नभेट्टाउने गरी ⁄ यसो ध्यानदृष्टिले हेर्दै जाँदा उनीहरूका ठूला आँखाले नभेट्टाए पनि जनसाधारणका सामान्य आँखाले खोज्दा भने त्यो पैसा भेटिएला जस्तो छ ।
नेपालीहरू पहिलेभन्दा अहिले निकै धनी हुँदै गएका छन् । हिजोभन्दा आआफ्नो खल्तीमा अलि बढी नै नोट पार्किङ गर्ने सोख पाल्न थालेका छन् । हुन पनि हो पाँच वर्षअघि सय रुपैयाँले किन्न सकिने सामानलाई आजभोलि कम्पनी ५०० जति तिर्नुपर्ने भएको छ । देशको नोट व्यवसायको एकलौटी ठेकेदार राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले यो कुरा पुष्टि गर्दै आएको छ । त्यसै खल्तीमा रू. ५०० राख्नेहरूले आजकल कम्तीमा २५ सय राख्ने चलन सामान्य भइसक्यो ।
वर्ष ५, अंक १८, २०६६,
चिनी उत्पादकद्वारा नै कालोबजारी गर्ने चेतावनी[२०७६ चैत, २२]
दाहाल र भट्टराईबीचको सम्बन्ध फेरि चिसियो[२०७६ चैत, २०]